Ububanzi bezinto eziqinile kuketshezi abudluli ku-80% wobuncane besayizi wesiteshi sokugeleza kwepompo: Ubude beketshezi kufanele bube buncane kunobubanzi bokukhishwa kwepompo.
3. Iphampu inesakhiwo esiqondile, esihlala endaweni encane; I-impeller ifakwe ngqo kushaft yemoto, ngaphandle kokuhlangana, ipompo inesayizi emfushane isiyonke, isakhiwo esilula, okulula ukusigcina; Ukucabangela kokuthwala okunengqondo, i-cantilever emfushane emfushane, isakhiwo se-axial force balance balance, yenza ukuthwala nophawu lomshini kuthembeke ngokwengeziwe, futhi ipompo isebenza kahle, umsindo wokudlidliza mncane.
4. Iphampu lifakwe ekamelweni lempompo elomile ukuze kugcinwe kulula.
Impompo yokucwilisa eqondile, mpompo yendle ecwilayo eqondile
Olandelayo: I-DG / ZDG Pump Boiler Okuphakelayo